कहाँ–कहाँ भेटिए शंकास्पद वस्तु ? | Sindhuli Saugat
कहाँ–कहाँ भेटिए शंकास्पद वस्तु ?
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ फागुन ३० गते बिहीवार काठमाडौं
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दका कारण देशभरको जनजीवन सामान्य प्रभावित बनेको छ । ठाउँ–ठाउँमा राखिएका शंकास्पद वस्तुले जनतामा त्रास पैदा भएको छ ।
पोखराका दुई ठाउँमा शंकास्पद बस्तु देखिएपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सभागृहचोक र भण्डारढिकको खेलमैदान नजिकै अज्ञात समूहले शंकास्पद वस्तु राखेको र अहिले त्यसको सेनाले जाँच गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान ५ बजेतिर कसैले ल्याएर छाडेको स्थानीयले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
यता बिहानै गोरखा सदरमुकामका दुई ठाउँमा शंकास्पद वस्तु भेटिएका छन् । गोरखा नगरपालिका ६ क्याम्पसरोड र बाह्रकिलोमा कुकर बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु भेटिएको प्रहरी उपरीक्षक भोला रावलले जानकारी दिनुभयो । बम भएकै आशंकामा निष्कृय पार्न नेपाली सेनाको टोली त्यहाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै रौतहटको चन्द्रपुर र व्रिन्दावन नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने हर्षाह चोकमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । बम रहेको आशंका गरिएपनि प्रेसर कुकरभित्र कागजका टुक्राहरु राखिएको भेटिएको छ ।
यसैबीच, बुटवलको कालिकाचौकमा आज बिहानशंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । रुपन्देही स्थित सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल बेलहिया खण्डको कालिकाचौकको ट्राफिक ब्रेकरमाथि शंकास्पद वस्तु भेटिएको हो । बमजस्तै देखिने वस्तुलाई डिस्पोजल गर्न नेपाली सेनाको टोली त्यहाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, मकवानपुरको हेटौँडा औद्यागिक क्षेत्रको गेटमा पनि शंकास्पद बस्तु फेला परेको र सेनाको बम डिस्पोजल टोली घटना स्थलमा पुगेर डिस्पोज प्रक्रिया शुरु गरेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।जनता समाचार बाट
पछिल्लाे - द्वन्दको अवस्था सिर्जना नगर
अघिल्लाे - सबै सरकारी चिकित्सकले राजीनामा दिने